पुरुषको अण्डाकोष सुनिने, स्त्रीको सेतोपानी आउने र पिसाब रोगको औषधि ‘जिरा’ पुरा हेर्नुस= - Taja Report
Homeस्वास्थ्य/जिबनशैलीपुरुषको अण्डाकोष सुनिने, स्त्रीको सेतोपानी आउने र पिसाब रोगको औषधि ‘जिरा’ पुरा हेर्नुस=
पुरुषको अण्डाकोष सुनिने, स्त्रीको सेतोपानी आउने र पिसाब रोगको औषधि ‘जिरा’ पुरा हेर्नुस=
August 22, 2018 स्वास्थ्य/जिबनशैली Comments Off on पुरुषको अण्डाकोष सुनिने, स्त्रीको सेतोपानी आउने र पिसाब रोगको औषधि ‘जिरा’ पुरा हेर्नुस=
पिसाब रोग र पत्थरी भएमापुरुषको अण्डाकोष सुनिने, स्त्रीको सेतोपानी आउने, सुल, पिसाब रोग र पत्थरीको औषधि ‘जिरा’
छोकडा, मरिच, सिदेनूनको, मुनक्का दाख र जीरा बराबर पिनेर कागति हालेर लेदो अचार बनाउने र सिसीमा राख्ने र बिहानरबेलुका
खाना खानु अगाडि १्१ चम्चा चाटेर मात्र खाना खाने गरेमा केही दिनमै अजीर्ण, बान्ता हुने, दीसा लाग्ने जस्ता रोग ठीक हुन्छ र बिस्तारै खाना पनि रुच्दै जान्छ ।
यो खुशीको खबर सबैसम्म पुग्नेगरी सेयर गरौँ । ता की अबपनि विदेश पठाउने नाममा दलालले पैसा खान नपाउन् ।
घर छोडेको दिन र बा को फाटेको चप्पल !! अवश्य पढ्नुस !! नपढे पछुतो हुनेछ !! मात्र २ मिनेट समय दिनुस
कम्तीमा पचास जनालाई शेयर गरि आफु पनि स्वास्थ्य वनौ र अरूलाई पनि स्वास्थ्य बन्न प्रेरित गरौ,… (210)
३ करोड नेपालीलाई खुशिको खबर : नेपाल विश्वकै सुन्दर देशको पहिलो स्थानमा, भारत सूचीमै परेन (फोटो फिचर) (132)
जग्गा नापमान सम्बन्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी तपाईंलाई छ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस (75)
म सोच्थेँ बुवा लोभी भएर फाटेको जुत्ता लगाएको होलान् तर होइन रहेछ पैसा कमाउन गार्हो रहेछ (68)
घर छोडेको दिन र बा को फाटेको चप्पल !! अवश्य पढ्नुस !! नपढे पछुतो हुनेछ !! मात्र २ मिनेट समय दिनुस (57)